Dhalanteedka Horrumarka Dhaqaalaha Djibouti | Berberanews.com
Home WARARKA Dhalanteedka Horrumarka Dhaqaalaha Djibouti
Dhalanteedka Horrumarka Dhaqaalaha Djibouti
Inkasta oo koriin iyo dadaal saxaafada loo muujiyay, hadana marka loo ukuur galo wax ka qabadka dhaqaale ee qaranka iyo siyaasada liidata ee aan fadhiyin waxay muujinaysaa in muuqaalka fursadaha maalineed ee Djibouti la buun buuniyay oo ayna ahayn mid waaraysa.
LONDON, United Kingdom(Berberanews)-EXX Africa (ExxAfrica.com) waxa uu baahiyay warbixin gaar ah oo lagu eegayo maalgalinta dalka, 24 May 2018. Marka ugu horeysa ee la eego, Djibouti waxaad moodaa meel aad maalgalinta ugu haboon gaar ahaan qalalaasaha ka taagan Mandaqada Afrika. Xasiloonida dalka waxaa lagu xiqiijiyaa joogitaanka ciidama shisheeye iyo khatarka amni ee mandaqada waxba ayna kasoo gaadhin.
Djibouti waxay ku taalaa meel istiraateejiyad oo dhacda khadadka maraakiiba caalumka ugu mashquulka badan, iyada oo maamusha meesha ay iska galaan Bada Cad iyo Bada Indhiyaan Oshinku, taas oo soo jiidatay maalgalinta maalqabeenada Afrika, reer galbeedka, Aasiya, iyo maalgaliyayaasha dalalka Carabta, kuwaas oo si gaar ah u maal gashada aagaga bada, dhismaha, diyaaradaha, shidaalka iyo waaxda difaaca.
Laakiin, joojinta aadka indhaha caalamku ula socdaan ee heshiiskii ganacsiga ee dakada horaantii sanadkan ayaa waxay keentay in su’aalo la iska waydiiyo siday Djibouti ula dhaqmayso maalgalinta shisheeye. Dhanka kalena, dawlada waxa kordhisay janjeedhka ay u janjeedho wadaniyada taas oo hormarinaysa waxka qabadka dalka dhanka dhaqaalaha. Sidoo kale, Djibouti waxay kala doorbidaa ciday gacansaarka hormarineed la yeelanayso, taas oo ku xad gudubtay heshiisyadii hore u jiray. Dhaxgalkaasi waxay qaabaynaysaa mustaqbalka maalgalinta shisheeye ee wixii ganacsiyada adeega ah, halka laga dayacay khayraadkii dabiiciga ahaa ee Djibouti.
Waxaa inta dheer, isaga oo markii afaraad jagada madaxwaynaha la wareegey madaxwaynaha dalka ka taliyaa kaas oo ku guulaysay codad aad u badan doorashadoo labada sano kahor, mucaarad cusub ayaa iminka ka mudaharaadsan doorashada dalka, kuwaas oo dalbana in isbadal siyaasadeed la sameeyo. Ciidama ayaa fara ba’an ku haya sidii ay u kala diri lahaa cidii taageysaysa mucaaradka iyo kuwa u dooda xuquuqda bilaa aadanka. Iyada oo cabudhisay xoriyatul qawlkii iyo xuquuqdii siyaasadeed, dawladu waxay kor u qaaday kala qoqobka qabiilada waxayna taas oo fursad u abuuraysa inay timaado iska caabin hubaysani. Sidoo kale, maadaama oo ayna cadayn cida badali doonta madaxwaynaha, waxay iyana kordhisay tartanka iyo waxyeelaha siyaasada ee mudada dheer.
Marka la eego, Djibouti dhaqaalihii dawlaha waxay ku salaysay waxa ay usoo tuureen dalalka mandaqada hogaaminaya sidoo kale iyada oo ku guul daraysatay inay dhaqaalaha baahiso oo ayna dekada oo kaliya dhaqaalaha soo gala aan lagu salaynin, marka runta la eego fursada maalgashi ee dalka ka jira way xadidan tahay. Weliba waxaa sii dheer, in wadaniyada lagu saleeyay dhaqaalaha, sidoo kale xasiloonida siyaadadeed ee liidataa waxay muujinaysaa muuqaalka dhalanteedka wakhtigan ee fursadaha maalgalineed ee Djibouti leedahay taas oo ah mid la buun buuniyay oo aan waaraynin.
Wixii macluumaadka dheeraad ah ama nuqulka warbixinta oo dhamaystiran ah, fadlan la xidhiidh ExxAfrica.com
Previous article“Laascaanood iyo Sool waa la xoraynayaa”Afhayeenka Madaxtooyada Puntland
Next articleMuhaajiriin Afrikaan ah oo badda laga soo samatabixiyay